ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 လ2weeks ago #1816
မင်္ဂလာပါရှေ့ပြေး! ဒီကိုမေးလျှင်စိတ်မကောင်းပါ။ ငါ 1/2 နာရီရှာဖွေနှင့်ဗလာတက်လာ၏။
ငါလေယာဉ်သို့မဟုတ်ရှုခင်းဖိုင်ဒေါင်းလုပ်နှင့် install လုပ်ဖူးဘူး။ ဒီ Boeing 737-MAX8 Multi-Livery နဲ့စမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် FSX & P3D။ ငါ့မှာရှိတယ် FSX။ Windows 10 ကိုငါ download လုပ်ပြီးပြီ။ ယခုငါဘာလုပ်ရမလဲ။ တပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များပါသောစာမျက်နှာရှိပါသလား။
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 လ2weeks ago #1817
သူပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာပါ၊ အောက်ဘက်ရှိမျဉ်းပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းပါ၊ ထို့နောက်သင်အလိုရှိသည့်နေရာတွင်အလိုအလျောက်သိုလှောင်လိမ့်မည်။
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 လ2weeks ago #1820
Hello Pilots - ငါပြaနာမရှိဘဲ B737 Max 8 ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါစတဲ့အခါ FSX Fly Inside VR နှင့်အတူ Steam Edition, ငါ့လေယာဉ်အဘယ်သူအားမျှသူတို့ရဲ့အင်ဂျင် running ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ငါ manual start ကြိုးစားခဲ့နှင့်အင်ဂျင်မဖွင့်ကြဘူး။ ငါ CTRL E ကိုအသုံးပြု။ အင်ဂျင်စတင်တူညီသောအရာ။ သူတို့က crank ပေမဲ့မလှည့်ဘူး။ ပြောင်းပြန် FXS SE ကို Fly Inside မပါဘဲဖွင့်သောအခါလေယာဉ်အင်ဂျင်သည်ပြanနာမရှိဘဲစတင်သည်။ မက်စ် ၈ ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အထိကျွန်တော့်မှာပြသနာမရှိခဲ့ဘူး။ ဒီလှပတဲ့လေယာဉ်ကို uninstall လုပ်တာထက်အခြားတစ်ယောက်ကကူညီနိုင်မလား။
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 လ2weeks ago #1821
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ပြissueနာကိုဖြေရန်ရှက်ရွံ့သော်လည်းကျွန်ုပ်မသိသောအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည် FSX ငါ့လေယာဉ်အားလုံးဆီမှာလောင်စာမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ပြtheနာပဲ! ချွတ်ယူမီကြိုတင်လောင်စာဆီ! ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်တစ်ခုရှိပြီးလေကိုသင်၏တောင်ပံအောက်တွင်ထားပါ
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 လ2weeks ago #1822
နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်မှု - ဖြင့် TH1Flyer.
ဘိုးအင်း 737-MAX8 Multi-Livery FSX & P3D 1 days ago3လ #1842
Hi Guys, Tip,i got cault out re start up in max737-800.Make sure the trim wheel is set between 2-3 degress up.Do this is v/cockpit by manual set.
Because it will not take off at V1or Vr .Hope this help some people.
0.291 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်